ဦးကိုနီကိုသတ်တဲ့အမှု နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်ချုပ်က ပလပ်လိုက်တဲ့အတွက် အောက်ရုံးကချထားတဲ့ပြစ်ဒဏ်အတိုင်းမို့ အထူးအယူခံဆက်တက်မည် – Voice of Myanmar
ရှေ့နေကြီး ဦးကိုနီကိုသတ်တဲ့အမှု နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်ချုပ်က အပြီးသတ် အမိန့်ချမယ်
ဦးကိုနီကိုသတ်တဲ့အမှု နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်ချုပ်က ပလပ်လိုက်တဲ့အတွက် အောက်ရုံးကချထားတဲ့ပြစ်ဒဏ်အတိုင်းမို့ အထူးအယူခံဆက်တက်မည်
January 10, 2020 Editor Htein Lin
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၁၀-၂၀၂၀
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကိုနီနဲ့ အငှားယာဉ်မောင်း ဦးနေဝင်းတို့ကို သတ်တဲ့အမှု စီရင်ချက်ကို နေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်မှာ ပြင်ဆင်မိန်. တက်ထားတဲ့အမှုကို ဒီကနေ့ ဆုံးဖြတ်တာမှာ အောက်ရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းအတည်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက် အထူးအယူခံ ဆက်တက်မယ်လို့ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်ကပြောပါတယ်။
ဦးကိုနီနဲ့ ဦးနေဝင်းဟာ ၂၉/၁/၂၀၁၇ တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ ၅ နာရီခန့်က ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ သေနတ်သမား ကြည်လင်းရဲ့ လက်ချက်နဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေနတ်သမား ကြည်လင်းနဲ့ ပူးပေါင်း ကြံစည်သူ အောင်ဝင်းဇော်တို့ နှစ်ဦးကို မသေမချင်း ကြိုးကွင်းစွပ် သတ်ရန် ၂၀၁၉ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၅ ရက်က ရန်ကုန် မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအမှုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ တခြားတရားခံ ဇေယျာဖြိုး ကိုတော့ ၅နှစ် ၊ အောင်ဝင်းထွန်း ကို ၃နှစ်ချမှတ်တာဟာ လုပ်ရပ်ထက် ပြစ်ဒဏ်ဟာ နည်းနေတဲ့အတွက် ခုလိုနေပြည်တော်တရားလွှတ်တော်ကိုထပ်မံလျှောက်ထားခဲ့တာမို့ ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး ဒီကနေ့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
#voiceofmyanmar #VOM #ဦးကိုနီ #ဦးနေဝင်း #ကြည်လင်း
ဦးကိုုနီကိုုသတ္တဲ႕အမွဳ ေနျပည္ေတာ္တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ပလပ္လိုုက္တဲ႕အတြက္ ေအာက္ရံုုးကခ်ထားတဲ႕ျပစ္ဒဏ္အတိုုင္းမိုု႕ အထူးအယူခံဆက္တက္မည္
ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၀-၂၀၂၀
တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးကိုနီနဲ႔ အငွားယာဥ္ေမာင္း ဦးေနဝင္းတို႔ကို သတ္တဲ့အမႈ စီရင္ခ်က္ကို ေနျပည္ေတာ္တရားလႊတ္ေတာ္မွာ ျပင္ဆင္မိန္. တက္ထားတဲ႕အမွုုကိုု ဒီကေန႕ ဆံုုးျဖတ္တာမွာ ေအာက္ရံုုးဆံုုးျဖတ္ခ်က္အတိုုင္းအတည္လိုု႕ ဆံုုးျဖတ္လိုုက္တဲ႕အတြက္ အထူးအယူခံ ဆက္တက္မယ္လိုု႕ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ကေျပာပါတယ္။
ဦးကိုနီနဲ႔ ဦးေနဝင္းဟာ ၂၉/၁/၂၀၁၇ တနဂၤေႏြေန႔ညေန ၅ နာရီခန႔္က ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွာ ေသနတ္သမား ၾကည္လင္းရဲ႕ လက္ခ်က္နဲ႔ ကြယ္လြန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေသနတ္သမား ၾကည္လင္းနဲ႔ ပူးေပါင္း ႀကံစည္သူ ေအာင္ဝင္းေဇာ္တို႔ ႏွစ္ဦးကို မေသမခ်င္း ႀကိဳးကြင္းစြပ္ သတ္ရန္ ၂၀၁၉ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၅ ရက္က ရန္ကုန္ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ုံးက အမိန႔္ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီအမႈမွာ ပါဝင္ပတ္သက္တဲ့ တျခားတရားခံ ေဇယ်ာၿဖိဳး ကိုေတာ့ ၅ႏွစ္ ၊ ေအာင္ဝင္းထြန္း ကို ၃ႏွစ္ခ်မွတ္တာဟာ လုပ္ရပ္ထက္ ျပစ္ဒဏ္ဟာ နည္းေနတဲ့အတြက္ ခုလိုေနျပည္ေတာ္တရားလႊတ္ေတာ္ကိုထပ္မံေလွ်ာက္ထားခဲ့တာမို႔ ျပန္လည္စစ္ေဆးျပီး ဒီကေန႕ ဆံုုးျဖတ္လိုုက္တာျဖစ္ပါတယ္။
#voiceofmyanmar #VOM #ဦးကိုနီ #ဦးေနဝင္း #ၾကည္လင္း
Breaking News, သတင္း, ျမန္မာသတင္း
ငပုတော၊ ဇန်နဝါရီ ၁၈-၂၀၂၀ ကိုအောင်(VOM) ဧရာဝတီတိုင်း၊ ငပုတောမြို့နယ် အထက(၁)ကျောင်း ပုရဝဏ်အတွင်းမှာ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက...
ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ ဆရာ၊ဆရာမ ၂၀၀ ကျော် ပြောင်းရွှေ့ခွင့်တင်
ရန်ကုန်၊ဇန်နဝါရီ ၁၈-၂၀၂၀ စွဲ့ဝတီ(VOM) ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ လုပ်သက်တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၀၀...
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းဖို့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ တရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်ကို ဆန္ဒပြ
ရန်ကုန်၊ဇန်နဝါရီ ၁၈-၂၀၂၀ သိင်္ဂီ (VOM) ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေက ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းဖို့ မြန်မာအစိုးရနဲ့...
ရွှေတိဂုံဘုရာပေါ်မှာ သက်တမ်းရှိ(G)လိုင်စင် ကိုင်ဆောင်တဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန်သာအသုံးပြုရန် ထုတ်ပြန်
ေဗာဓိတေထာင္ ရပ္ေတာ္မူရုုပ္ပြားေတာ္ျမတ္အား ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္မြမ္းမံျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္
ဇလုံေတာင္ေပၚကိုု ေတာင္တက္ကားလိုုင္း စတင္ေျပးဆြဲေပး
ZERO ဘတ္ဂ်က္လို႕ေခၚေနႀကတဲ႕တရုတ္ခရီးသြားေတြေႀကာင့္သာခရီးသြားဦးေရ မက်တာျဖစ္ျပီး တိုုင္းျပည္ဝင္ေငြရဖိုု႕ ေငြေပးေငြယူစနစ္ကိုု သံုုးသပ္ေန
ပုပၸားေတာင္ေဒသကိုု ကမာၻ႔ဘူမိဥယ်ာဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရဖုိ႔အလားလာေကာင္းမ်ားရွိေန
ဆြမ္းဦးပုညရွင္ေစတီေတာ္မွာမွန္သားခင္း(View Point) ၿပဳလုပ္မယ့္ အစီအစဥ္ပ်က္
ျမိဳ႕ပတ္ရထားစီးနင္းခ ဂ်ပန္က ၄ ေဒၚလာ သတ္မွတ္​မႈအ​ေပၚျပန္​တြက္​ခ်က္​ေန
ရန္ကုန္မနၱေလး ရထားလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင္တင္ေနစဥ္အတြင္း ကုန္တင္ရထားတြဲမ်ား ႐ိုးမပတ္လမ္းမွသြားရန္စီစဥ္
ကုသိုလ္​​ေတာ္​နဲ႔ စႏၵာမုနိဘုရားမွာ ႏိုင္​ငံျခားသား ဧည္​့သည္​ ၀င္​​ေၾကး ေကာက္​ဖို႔ တိုင္​းအစိုးရထံ တင္​ျပ
ေဗာဓိတစ္ေထာင္ဆင္စခန္းဟာ ဖြင့္လွစ္တဲ႕ တစ္လေက်ာ္အတြင္း တျခားစခန္းေတြထက္ ဝင္ေငြအေကာင္းဆံုးျဖစ္
January 15, 2020 Editor Htein Lin 0
စစ်ကိုင်း ကျောက်တာမှာ ကျောက်ပြင်ထုတ်တဲ့ ကုန်ကြမ်းကျောက်ရှားပါးလာ
December 12, 2019 Editor Htein Lin
ခိုးဝင်မွတ်စလင်တွေကို နိုင်ငံသားမပေးတဲ့ ဥပဒေကြမ်း အိန္ဒိယပါလီမန်အတည်ပြု
January 18, 2020 Editor
ထူးဆန်းတဲ့ အဆုတ်ရောင်ရောဂါကြောင့် တရုတ်မှာ သေဆုံးသူနှစ်ဦးရှိလာ၊ ထိုင်းနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံတို့မှာလည်း ကူးစက်ခံရသူတွေ့ရှိ
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကလေးမွေးဖွားမှုနှုန်း နှစ် ၇၀ အတွင်းအနိမ့်ဆုံးကျဆင်း
အာဖရိကတောင်ပိုင်းရှိ လူဦးရေ ၄၅ သန်း အငတ်ဘေးဆိုက်နေ
တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ပြီး လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် မြေပုံမြို့ဒေသခံတွေ စစ်တွေမြို့ကို ထွက်ပြေးရောက်ရှိ
ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကားလိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာရေးကို ငါးရက်အတွင်း တိကျသေချာတဲ့အဖြေမရရင် ပြင်းထန်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်လုပ်မယ်
ဇီဝမျိုးကွဲတွေကျက်စားနေတဲ့ မိုးယွန်းကြီးအင်းကို ဇုန်နယ်မြေသတ်မှတ်ခွဲခြားပြီး စနစ်တကျအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ စီစဉ်နေ
တရုတ်သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်ထံ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့